Usilika Phrinta isikhafu Abahlinzeki nefektri - China Usilika Phrinta isikhafu Abakhiqizi
imfashini yokwakha isikhumba sikasilika esinezinwele
Lapho ufaka isikhafu, ukunakekelwa okuthambile nokunomusa kwesikhumba, ake uzizwe ukhululekile usuku lonke. Usayizi Ongenisiwe ongu-100% Usayizi: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, isikwele, usayizi wethayela.Size meet client client. Okubalulekile: 100% kasilika kamalibhele, i-satin ethafeni, i-12mm, i-14mm, i-16mm, isisindo esincane, ukuthamba, ukuxhumana okunethezekile nesikhumba. Idizayini: Izinhlobo ezahlukahlukene zedizayini ehlakaniphile namaphethini aphrintiwe ngokucophelela (ukuphrinta ngohlangothi olulodwa), imibala emihle emihle, amaphethini amahle amahle. Ukupakisha ibhokisi lesipho. Kufanele: Isikwele bandana ...
Isikhafu sesikwele sabesifazane logo
Imfashini yokwakha isikhafu shawl
Isikhafu sikasilika sokuphrinta sabesifazane
Isikhafu sokuphrinta kwesikrini
Imiklamo ehlukile yesikhafu sikasilika
Shawl yesikhafu semfashini kanokusho
Khiqiza isikhafu sikasilika isikwele
Ishawuli yesikhafu eside sikasilika